Nyaya yeKurambidza Vanhu Kunzwa VaChiwenga Vachipa Huchapupu Yokonzera Mutauro muNyika
Zvita 17, 2021
Retired general Constantino Chiwenga and Defense Minister Kembo Mohadi arrive at the State House to take oaths of office as Zimbabwe's vice presidents, Harare, Dec. 28, 2017.
Mutongi wedare ramejastiriti muHarare Valazini Ncubenemusi weChina vakapa mutongo wekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga vape huchapupu hwavo mudare musina vanhu kana vatori venhau panyaya yavari kunetsana nemudzimai wavo wavari kurambana naye Muzvare Mary Mubaiwa vachivapomera mhosva yekutyora mutemo wezvemichato kana kuti Marriages Act.
Gweta uye vaimbobva mejastiriti VaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti dare haraifanira vanhu kurambidzwa kunzwa nyaya iyi nekuti haine nezvekugadzikana kwenyika.
Mashoko aya atsinhirwa nerimwe gweta vachidzidzisa mutemo paUnivesity of Kent Doctor Alex Magaisa vati matare emuZimbabwe ave chiseko pasi rose nekuti anotonga achiuudzwa zvekuita nevematongerwo enyika.
Asi gweta vari nhengo yeZanu-PF VaTinomudaishe Chinyoka vanoti zvakakosha kuchengetedza vana panenge pachirambana vabereki nekudaro hazvina kukosha kuti veruzhinji vange vari mudare panyaya yekurambana kwaVChiwenga nemudzimai wavo.
Muzvare Mubayiwa vari kupomerwa mhosva yekuti vaida kuita chikiribidi vachinyoresa muchato kudare nekukoka mutongi VaMunamato Mutevedzi kumba kwavo kuti vatorese mhiko vaviri ava kumba kwavo.
Asi VaMutevedzi vanonzi vakawana pamba pacho pasina vanhu. Vaviri ava vainge vakaroorana pachivanhu. Asi Muzvare Mubayiwa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Vachuchusi vehurumende vakange vaisa chikumbiro ichi kudare kuti vanhu vasanzwe huchapupu hwaVaChiwenga vachiti vaizviitira kuchengetedza hoffisi yavo yemutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Asi Muzvare Mubayiwa vange vachiramba kuti nyaya iyi isanzwikwe neveruzhinji vachiti zvinotyora kodzero dzavo dzekuti vanhu vanzwewo matongerwo enyaya iyi.
Rimwe gweta raMuzvare Mubayiwa Amai Beatrice Mtetwa vakaudza dare kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo nekudaro VaChiwenga havafanire kubatwa zvakasiyana nevamwe munyika.